Tageen maalmahaan marka dadka loo isticmaalo si ay u fuliyaan kulan leben iyo xoqo ROMS CD / DVD oo ay ku raran kulan joogay jeer niyad sabab u tayo liita iyo nidaamka ku deldel. Waxaan ku nool nahay "riyo" dunida meesha technology ayaa ku yimiday oo waayo-aragnimo ciyaaraha in ay height aan horay loo arag. Iyadoo websites sida emuparadise.me, aad maalintii oo dhan negaanaya aad PC qarashgareyn kartaa! Maxaad sidaa? Tani waa website ah in uu yahay mid ka mid ah noocyada kala duwan ee ay marka ay timaado ciyaaraha iyo xaasidnimo. Isku diyaari safarka emuparadise.me iyo naftaada quusin adduunka cusub ee ciyaaraha iyo xaasidnimo galay.
Si ka duwan websites kale ee ay tahay inaad bixiso adeegyada ciyaaraha ama kuu diyaarin Macmiil bil walba, wax walba oo halkan waa xor ah oo 100% ammaan ah. Sidaas, sababta ma waxaad ku quusin iyo ogaato sababta emuparadise.me kugu habboon?
Maxaad emuparadise.me kugu habboon.
Daal ee raadinaya kulan video salkiisa martay qotada dheer ee internet-ka? Waxaad u timaadeen inaad meel sax ah. Ugu emuparadise, waxaad ka heli doontaa boqolaal kun oo ROMS, ISOS iyo ciyaaraha. Waxaad kala soo bixi kartaa oo iyaga u ciyaaro ama iyaga ciyaari xaq gudaha suuqa kala browser aad. Maxaad emuparadise?
Xawaaraha Experience in uu yahay 3 jeer in ka mid ah websites caadiga ah.
Marka baaritaanka waxaa loo sameeyay si loogu downloads ka ah goobaha ugu weyn ee halkaas, waxa la ogaaday in downloads emuparadise ka tagaan xawaare ka dheerta ee 1MB / S meesha websites kale oo kaliya maamuli karo oo ku saabsan 300KB / S.
ROMS More, ISOS More, More Games
Emuparadise ayaa kulan 40% in ka badan meelaha kale. Iyada oo ka kooban in ka badan la shaqeeya by bulshadeena, waxaad ku dhowaad Halkan wax ka heli kartaa.
Ma doonaysaa qaar ka mid ah wargeysyada ciyaarta, aad halkan ka heli doonaa. Ma doonaysaa ciyaarta music video, waxaana u helay. Ama aad rabto in aad kala soo bixi dhacdooyin TV of Pokemon, quusin in.
Waa maxay sababta ay dadku doonayaan in ay helaan goobo la mid ah sida emuparadise.
Hawlaha Free Qarnigii 21aad, waa adag tahay inay helaan adeegyo lacag la'aan ah andwhen websites emuparadise sida ka jiraan, taas oo bixisa adeegyada gaar ah oo bilaash ah, dadka mar walba ido doonaa.
Content More. -It Aad u niyad-jab marka mid ka guuro mid ka mid ah website kan kale ku raadinayaan kulan, ISOS ama ROMS. Marka website oo kale ah emuparadise ka jira oo bixiya oo dhan ee saqafka ka mid ah, waxa uu noqonayaa mid aad u sahlan dadka isticmaala.
Speed- xawaaraha ee downloads arrimaha badan oo dadka mar walba door bidaan doonaa inaad kala soo baxdo content ka goobood oo xawaare si degdeg ah oo xasiloon.
15 Shabakadaha kaas oo ku siin emulators iyo ROMS emulator
Zone Emulator waa mid ka mid ah website-ka ugu caansan u emulators. Waxay bixisaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan emulators, ROMS, updates, fiisa emulator daray links download iyo ratings ee emulators ah.
Doperoms.com waa archive la wada of Retro video kulan. Website-kani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u ciyaaro hayaan ee hore kulan video on your computer ama qalab mobile. Website waxay kaloo bixisaa khayraadka wanaagsan oo waxbarasho, dhaq-dega Khayaadka oo bilowga ah.
Manymo waa website kale ka hadlaya in emulators. Si ka duwan websites kale, heshiisyo Manymo in emulators Android u saxafiyiinta Chine ee website-yada, horumarinta, iskaashiga, imtixaanka si toos ah iyo QA. Website A caadi ah iyo in ka badan 100,000 oo qof iyo ururo ayaa bilaabay malaayiin emulators Manymo.
Sida emuparadise, CoolRom waa mid ka mid ah ugu weyn khayraadka ciyaaraha Retro on shabaggii kun oo kulan (ROMS), iyo emulators ugu danbeeyay ee iyaga ay maamulaan. Waxa kale oo uu leeyahay Screenshot ciyaarta, ratings iyo videos Falanqeynta gameplay.
Hel Your Rom
Hel offerusers ROM aad downloads lacag la'aan ah si users caawin karaa classic Retro video kulan ay pc ama qalab mobile. Dhammaan kulan ee website-kan waxaa loo tixgeliyaa in uu faraha ka iib-tobankii sano jir sida ay aan la gado ama soo-saaruhu asalka ah.
In internetka, waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan waxyaabaha ay ka midka yihiin xuquuqda daabacaada, isticmaalka emulators kulanka iyo waxyaabaha been-abuurka ah. Waxa kale oo aad ka heli doontaa su'aalo iyo jawaabo ku saabsan ciyaarta video Nintendo emulator, iyo Nintendo video ROMS.
Emulators Mobile ka saarayaasha qalab (OEM)
Saarayaasha Device ama OEM bixisaa emulators desktop ah barnaamijyadooda. Waxay waxaa loogu talagalay horumarinta codsiga hooyo laakiin weli waxaa loo isticmaali karaa si loo baaro website mobile. Emulator ayaa bixisay ku soo saaraha qalabka ama OS bixiyaha waa ka duwan oo ku habboon ugu dhow in ay imtixaanka qalab dhabta ah.
Faanaa Romhustler.net ah oo haysta ROMS iyo emulators ugu fiican shabaqa. Website uu run ahaantii ay leeyihiin tiro ka mid ah ROMS iyo emulators kasta la xiddigood iyo votes macaamiisha. Waa mid ka mid ah goobaha emulator dhowr goob mobile.
Waxaa jira emulators badan oo kulan guridda on this site kumanyaal kulan uu ka soo xulan sida in aad hoosba, doorasho. Dhamaan kulamada ay yihiin lacag la'aan ah inuu ciyaaro laakiin haddii aad rabtid in aad tijaabiso in aad nasiib, kulan casino waxaa laga heli karaa. Emulators ayaa sidoo kale laga heli karaa bogga, inkastoo aan si badan.
Mid ka mid ah website-ROM keentay la ROMS iyo tilmaamaha xad-dhaaf ah oo ku saabsan sida loo ciyaaro kulan Mame ku iPhone iyo iPad. Adduunka ROM marnaba ka dhigi doonaa kulan ilaaliyo diyaar u download. Waxay leedahay guud ahaan 30,000 oo ROMS.
Boggan waxa uu leeyahay Falanqeynta video muddo ku dhow oo dhan ROMS Mame ah, hore tayo sare leh iyo daboolida dib ugu ROMS iyo macluumaad waxa calaamado la mid ah (u) (!) Jeednaa si toos ah sharaxay goobta oo dhan. Waxa kale oo ay leedahay magaca shirkadaha oo ciyaarta iyo sidoo kale qaybaha ah inta badan kulamada iyo nidaamka sare taas oo muujinaysa waxa kulan la mid kasta oo ka mid ROMS waa horumariyo.
Website-kani waxaa ku jira macluumaad ku saabsan emulators iyo ROMS. Waxa si ba'an sharxayaa waafaqid oo ka mid ah emulators iyo baaxadda. Waxa kale oo uu leeyahay emulators iyo ROMS fara badan.
NitroRoms waa websites kale in ay diiradda saartaa 50% ROMS iyo 50% xaasidnimo. Goobta waxaa ku jira kulan badan ROMS, emulators iyo videos. Interface ayaa sidoo kale muujinaysa, in baaritaan la soo dhaafay, baaritaan loogu jecel yahay iyo tirada dadka isticmaalaya labada guests online iyo xubnaha.
Emulators.com uu yeesho waxyaabaha mashiinka dalwaddii u MS. Dos, Windows, Mac OS X, Linux iyo dhufto. Waxyaabaha ay samatabbixin dega Khayaadka oo aad u soomi kombiyuutarada Apple Macintosh iyo Atari ST classic. Emulators Kuwani waa fiican ee shaqsiyaadka kuwa ugu biiray ka Mac in ay PC iyo raba in nafo la maalgelineed ee software Macintosh.
Emulators ee PSP / PS VITA
Rugtan internetka waxay bixisaa xiriir download ee dhammaan emulators in harsan Sony PlayStation qaadi karo iyo VITA PS ah. Raadinta ee emulator PSP ugu wanaagsan? Markaas aad rabto in aad baadhid this page.
> Resource > Emulator > 15 Shabakadaha Awesome ka damcin, Like Emulator Jannada